DEG DEG:Gudidii uu magacaabay Camay oo noqday tusbax la furay & Xubno hor leh oo casilay kadib markii…. – Puntlandtimes
DEG DEG:Gudidii uu magacaabay Camay oo noqday tusbax la furay & Xubno hor leh oo casilay kadib markii….
December 5, 2018 Puntland PL
BOSASO(P-TIMES)- Wararka imaanaya magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhoweyd uu iska casilay xubinmadiisii gudida xalinta khilaafaadka ee uu magacaabay madaxweyne ku xigeenka Puntland Nabadoon Khaliif Aw Cali oo kamid ahaa gudidaasi.
Nabadoon Khaliif oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu iska casilay xubintii uu kaga magacownaa gudidaasi, waana shakhsigii labaad ee iska casila gudidii uu magacaabay Mr. Camay.
Nabadoon Khaliif Aw Cali Xubinta Is Casishay
Warar kale oo ku saabsan khilaafka Gaas, Camay iyo halka uu hada marato halkan hoose ka akhriso
DEG DEG+DHAGAYSO:Dagaalkii ka dhex qarxay Gaas & Camay oo daafaha u baxay Iyo Qaar kamid ah xubinihii gudidii xalinta oo hada ku dhawaaqay in ay…..
XOG:Waan Waantii laga dhex waday Gaas & Camay oo guul daraysatay Iyo Mowqifyo adag oo la kala istaagay
Abshir Muuse says:
Madaxweyne Cabdiweli Gaas ha xiro qaainul-wadanka(national traior) la yiraahdo Camay, maxkamadna ha la hor keeno maxa yeelay waxa uu shaqaynahaya cadowga Puntland. Kooxda Nabar iyo Naxdin iyo hogaamiye kooxeed Farmaajo ayaa hada uu soo jeestay burburinta Puntland.
Doqon weeye Gaas wuxuu u shaqeeyaa cadowga PUNTLAND iyo Xasan culusow